I-PUBG Hacks 🥇 Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Zonke ii-PUBG Hacks ozifunayo, ezinje ngeAimbot, iWall Hack, i-ESP, akukho kuphinda kubuyiswe, nokunye okuninzi. Ngeempawu ezingaphezulu kwakhe nawuphi na omnye umboneleli ojikelezayo, yiyo loo nto isenza ukuba sibe ngoyena mphuhlisi ubalaseleyo wePUBG hacks online.
Sele uyithengile iPUBG kugula? Fumana amanyathelo alandelayo apha
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge ii-PUBG hacks zethu, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, nto leyo ethetha ukuba unokuzisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu PUBG Hacks
I-PUBG Hacks, iAimbot, iNorecoil, i-ESP, iWall Hacks kunye nokunye
Thenga PUBG IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha umdlalo ofuna ukungena kuwo, njengoko sinokhetho oluninzi apha kwiGamepron.
Khangela i-hack evumelana neemfuno zakho kwaye uthenge isitshixo semveliso ngokufanelekileyo!
Zonke iintlawulo ezenziwa apha kwiGamepron zisingathwa yinkqubo yethu yokuhlawula ekhuselekileyo ngokumangalisayo.
Ukufumana ukufikelela kwiqhosha lakho kunye nokukhuphela iiPUBG Hacks!
Nje ukuba uthenge ukufikelela kwisitshixo semveliso, ungayisebenzisa ukukhuphela iiPUBG Hacks zethu kwangoko.
Kutheni usebenzisa i-Gamepron PUBG Hacks?
Uhlaziyo lwe-12.2 lwePUBG lubonisa imephu entsha esekwe eMzantsi Korea eyaziwa njengeTago, kwaye ngale mephu, abaphuhlisi bongeze kwisithuthi esifanelekileyo nakwizixhobo. Imowudi yokubuyela kwe-BR yomdlalo nayo ikhutshiwe kunye nohlaziyo olu, kwaye ivumela abadlali ukuba babuyele kumdlalo ukuba babulewe kwangethuba kumdlalo.
Imephu elandelayo ye-PUBG izakuba yi-Taego, kwaye iye yahlekiswa kwitreyila ebonisa ukuba loluphi uhlobo lweempawu abadlali abanokulindela ukuzibona xa ekugqibeleni ikhupha. Ezinye zeziganeko eziphawulekayo ekuhlaziyweni kubandakanya izixhobo ezininzi zaseKorea kunye nezithuthi ezibandakanya umpu we-K2 kunye ne-Hyundai.
Uhlaziyo lwePUBG 11.2 lujolise ekongezeni iPasivivor Pass kumdlalo, ugqibe ngomjikelo wokuqala: Ipati yePajama. Njengoko unokuthelekelela kwigama, izinto zokuthambisa kule pasi zonke zijolise kubuhle be-pajama. Ayisiyiyo kuphela eyongezwayo kuhlaziyo, nangona kunjalo, ikwabonisa notshintsho kwiibhlorho zase-Erangel.
I-PUBG ngumdlalo oya kwenza ukuba uqikelele okwesibini, kodwa ukusebenzisa ii-PUBG Hacks zethu kuya kuqinisekisa impumelelo yakho kuwo wonke umdlalo. I-Gamepron izinikezele ekuboneleleni abasebenzisi ngamava awodwa angayi kubavumela ukuba baphumelele imidlalo ye-PUBG kuphela kodwa bonwabele ixesha labo lokudlala umdlalo. Uyilelwe ukuba wonwabe kwaye uphumle ngelixa udlala imidlalo yevidiyo, kodwa ngamanye amaxesha ufuna ukuyisebenzisa njengendawo yokukhuphisana kwaye ukhulule- kulapho iPUBG Hacks zethu zidlala khona, nanjengokuba uninzi lwabadlali abasakhasayo besengadibana nabo Abadlali abanobuchule kwaye baphumelele.
Ngelixa abanye beza kufinga iintsimbi ngenxa yokukopa, kuya kuhlala kukho iqela labantu abenza nantoni na ukuze baphumelele! Kuninzi ekufuneka sikuhloniphile malunga nokufuna ukuphumelela yonke imidlalo yakho, kwaye nangona abadlali beqela lakho bengazi, ukusebenzisa i-PUBG Hacks yethu kuya kubanceda.
Iimpawu ezifumanekayo kwi-PUBG Hack yethu ayinakuphindwa, kwaye nangona uza kubona ezinye ii-hacks ezininzi ezithi zenza into efanayo, akukho nanye eya kwenza njalo ngenqanaba lomgangatho onokulifumana apha kwi-Gamepron. Asizami ukupompa ukukopela kwaye sijike inzuzo eninzi kangangoko kunokwenzeka kuba ukuba bekunjalo, ngekhe sibe nenani eliqingqiweyo leendawo zokubeka ezikhoyo! Sifuna kuphela abona badlali bazinikeleyo ukuba basebenzise cheats zethu, kuba siyazi ukuba banokuba namandla kangakanani - ukuba ufuna ukuzinikela ekuphumeleleni umdlalo wePUBG onokwenzeka, ukuthenga isitshixo semveliso nokukhuphela iPUBG Hack yindawo entle ukuqala .
Sebenzisa i-PUBG ESP yethu kukuvumela ukuba ugcine iithebhu kuhambo lotshaba kwaye wazi apho baya khona ngokulandelayo. Ukuba unokucinga kwangaphambili kwaye uyazi ukuba yeyiphi indlela abaza kuyithatha, ungababetha baye kuyo - kulapho ujika khona kwiPUBG Aimbot yethu kwaye ubathumele "kumhlaba wesithunzi".
IPUBG Wall Hack (ESP)
Ulwazi lwePUBG lomdlali i-ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
PUBG Into ESP eneefilitha
PUBG izilumkiso zotshaba
I-PUBG imo yokutsiba kakhulu (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo).
PUBG ithambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
PUBG Ukubuyisa umbuyekezo
Ngokufanelekileyo PUBG yimfumba Iimbonakalo
Usebenzisa izibonelelo zethu zePUBG Hack ufikelela kukhetho olukhethekileyo lwePUBG ESP, zonke ezikuvumela ukuba uphonononge intshukumo yomchasi wakho ngokulula.
Ngelixa uninzi lwababoneleli behack lungekhe likunike okuninzi ekusebenzeni nalo, sinokhetho lwe-ESP njengamagama omdlali, imivalo yezempilo, kunye nomgama wabo!
Into ye-ESP ikuvumela ukuba ubone izoyikiso ngohlobo lwezixhobo ezizodwa, kunye neziqhushumbisi kunye nezinye izinto zeefilitha ze-ESP ezikhoyo kwi-PUBG Hack yethu.
Abo badubula ngokuchaneka ngakumbi baya kuphumelela, ilula loo nto. Sebenzisa i-PUBG aimbot yethu ukuguqula ukakayi lomchasi wakho abe sisiSwitzerland!
I-PUBG Bullet track (esebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Ukulandelela iimbumbulu ukufumana umbono ocacileyo weqela elichasayo kuhlala kufanelekile kwiimeko ezimfutshane / phakathi komgama, yiyo loo nto sizibandakanyile kwiPUBG Hack yethu.
Ugula ngokudutyulwa ngasemva? Ingxaki sonke esijongana nayo, kwaye enye unokuyiphepha ukusebenzisa uphawu lwesilumkiso.
I-PUBG imo yokutsiba kakhulu (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo)
Imowudi yokutsiba okuMkhulu ibeka izinto ngendlela efanelekileyo, ngamanye amaxesha kufuneka wenze nantoni na ukuze uphumelele. Akukho monakalo wokuwa usindisa ubomi kumdlalo ofana nePUBG!
PUBG ithambo kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
I-PUBG Aimbot yethu ixhotyiswe ngokubekwa phambili kwethambo kunye nezinye iindlela ezininzi ezinokuqwalaselwa, ikunike amava okuqhekeza ngokwesiko nanini na ufuna.
I-PUBG aimbot iitshekhi ezibonakalayo
Ukutshekishwa okubonakalayo kuhlala kumnandi xa kuziwa kwi-PUBG aimbot, njengoko niza kwazi apho iintshaba zikhawuleza khona! Thenga isitshixo semveliso namhlanje.
Ukubuyiselwa kwembuyekezo kunye nembuyekezo ziyafumaneka kwi-PUBG Hack yethu, esinye isizathu sokuba abadlali abaninzi babeke ukholo lwabo kwi-Gamepron.
Yiba nguMdlali oBalaseleyo wePUBG ngeGamepron
Kukangaphi uzifumana uhleli ezantsi kwebhodi yabaphambili emva kokuba umdlalo ugqityiwe? Abadlali beGamers kwihlabathi liphela baziva ukubola okuphoxayo okuza nokuphulukana nomdlalo wePUBG, ngakumbi ukuba ukwisangqa sokugqibela kwaye ihempe yakho imanzi ngumbilo. I-Gamepron itshintsha umdlalo, isigebenga esinye ngexesha, kwaye lixesha lokuba uthathe isigqibo sokuba ukweliphi icala.
I-PUBG Hacks edumileyo kunye nokukhohlisa
IPUBG ESP kunye neWallhack
Ezinye iiPUBG Hacks kunye nokukhohlisa
I-PUBG Hacks kunye ne-Cheats zinika nabona badlali be-novice ukhetho lokukhuphisana ne "try-hards". Akukho hlazo ekubeni ulungile kumdlalo owuthandayo, ukuthetha kakubi abo bazukise izakhono zabo rhoqo akunakulunga- nangona singabagculi, siza kuthatha eyona ndlela ilula iye phezulu. Kutheni le nto ungazikhathaza ngengxaki yokuzama ukubila umdlalo ngamnye wePUBG, xa unokuvula ii-PUBG hacks zethu kwaye ubukele i-bots ikwenzela yonke into?
Ukuphumelela yeyona njongo iphambili yokufezekisa njengomdlali wePUBG, yiyo loo nto iPUBG yethu iye yathandwa kangaka. Abekho abanye ababoneleli phaya abazisa lo mgangatho we-PUBG Hack, kungasathethwa ke ngabaphuhlisi abanokubandakanya ezi zinto zininzi ngaphakathi kwesixhobo sabo! Ezona PUBG Hacks zaziwayo kwi-Intanethi ziya kubonakala zingenamsebenzi xa kuthelekiswa nezixhobo ezikhoyo apha kwi-Gamepron, kwaye unokufumana ukufikelela kuzo zonke ngexabiso elinye eliphantsi.
Cinga malunga nokuba kukangaphi ukuchaneka kwakho kukuyekisile ngexesha lokuqhekeka, njengoko kuphela kwabantu abashiyekileyo kwisangqa sokugqibela iya kuba ngabo bakufaneleyo (kunye nabambalwa abalahliweyo kumxube). Xa usazi ukuba isangqa sokugqibela siza kuzaliswa ngabadlali abanezakhono, elona thuba linokubakho ngokudubula - ukuphumelela imipu ePUBG kufuneka ibe yeyona nto ibalulekileyo kulo mdlalo. Ukuba awukwazi ukuphumelela umlo, awuyi kuba nempumelelo enkulu; Oko siqinisekile ngako! Xa ufuna ukwazi ukuba iimbumbulu zakho zineenjongo zokufa ngazo zonke iifoto, ukusebenzisa i-PUBG aimbot iya kuba yeyona nto ukubheja kwakho.
Ngeempawu ezinjenge-Bone Prioritization kunye ne-Auto-Aim / yoMlilo, abachasi bakho baya kuzicola ngokwabo xa bebona igama lakho kwisondlo sokubulala. Akukho xesha lokucinga kumdlalo onje ngePUBG, ke ngokuchanekileyo indlela oza kuyidlala ngayo ngelixa usebenzisa i-PUBG aimbot yethu iyakutshintsha ngokupheleleyo indlela odlala ngayo.
Imidlalo yevidiyo yenzelwe ukuvuza abo badlale ixesha elide kwaye baqonde umxholo womdlalo, kodwa ayinamsebenzi ukuba udlale iPUBG ixesha elingakanani xa iPUBG ESP yethu kunye neWallhack yenziwe yasebenza. Uya kuhlala usazi xa utshaba luzama ukuseta ukuba ulalele, njengoko unokusebenzisa "umbono we-x-ray" ukubona malunga nayo nayiphi na into- indawo ebonakalayo kunye neqinileyo ayihambelani nokuthandwa kwePUBG ESP yethu .
Ungabona zonke iintlobo zezinto xa unenqaku elenziwe lasebenza, njengegama leentshaba nokuba ingakanani impilo abayishiyileyo! Kusisiqalo nje nangona, njengezihluzi zezinto kunye nezinye iindlela ze-ESP ezinje ngezixhobo kunye neziqhushumbisi ezikhoyo kwi-PUBG hack yethu. Khange sibethe nje isixhobo ndawonye esiqukethe kuphela i-aimbot ekumgangatho ophantsi kunye nokuqhekeka eludongeni, sikhuphe ezona mpu zinkulu (akukho pun ejongiweyo!).
Landa umkhondo weentshaba zakho ngenqaku leNyawo, elisebenza njengoko igama lisitsho. Uyakwazi ukulandela umkhondo weentshaba zakho ngokulandela iinyawo ezenziwa yimfumba yethu; Unokwenza ukuba inqaku loMonakalo oMkhulu kwaye uqokelele ukubulala ngendlela yendalo ngakumbi. Ii-hacks zomgama ziluncedo ngakumbi kumdlalo ofana ne-PUBG, njengoko ungazi ukuba utshaba luza kuza nini ngasemva! Xa umgama ekukho kuwo iHack Hack, unokuhlala ubona ukuba lutshaba kangakanani indawo okuyo-ekuphela kwexesha umntu aza kusondela ngalo, kuxa ufuna njalo.
Ukujongana nomonakalo omninzi kuyanceda ngezizathu ezininzi ezicacileyo, eyokuqala kukuba iintshaba zakho aziyi nakweyiphi na imipu yakho onayo. Uya kube uphezulu kuyo yonke idabi elenzekayo, kwaye ngamanye amaxesha loo nto inokwanela ukuqinisekisa uloyiso lwakho.
Ukuba awuqinisekanga ngokupheleleyo ukuba ujonge ntoni kwi-PUBG hack, yazi nje ukuba i-Gamepron inayo nantoni nayo yonke into oyifunayo. Kudala siphuhlisa ii-hacks zethu ngokomsebenzi, kwaye kule minyaka idlulileyo sikwazile ukwakha inkqubo esivumela ukuba sikhuphe ezona cheats zisemgangathweni ophezulu. Ufuna ukuba nethuba kumdlalo onje ngePUBG, kodwa umntu ophakathi akanalo ixesha elaneleyo lokuzilolonga kunye nokudlala rhoqo.
Nokuba uzama ukunyathela abantu okanye udiniwe ngokwenyani kukuphulukana neninzi yemidlalo yakho ye-PUBG, ungathembela kuthi apha Gamepron ukukusa kwilizwe lesithembiso. Kutheni uchitha lonke elo xesha uziqhelanisa nokuthenga nje esinye sezitshixo zemveliso kwaye ukhuphisane nabona badlali babalaseleyo emhlabeni? Ungazitya zonke izidlo zenkukhu ongazithanda xa une-Gamepron PUBG Hack enikwe amandla, ke ungathandabuzi-thenga isitshixo semveliso kwaye uqalise namhlanje.
IiPUBG Hacks imibuzo
Kutheni iPUBG yethu iHacks
Ii-PUBG Hacks zethu zahlukile, njenge-cliche njengoko isenokuvakala. Awunikwa nje ukufikelela kwezinye ii-hacks ezikumgangatho ophantsi xa ukhetha ukukopela nge-Gamepron, njengoko uza kusebenza nezixhobo ezizodwa
zifumaneka kuphela kwinani eliqingqiweyo labasebenzisi. Abanye abaphuhlisi be-hack banokukhupha ii-hacks ezikumgangatho osezantsi, kodwa sihlala sigxila ekuziseni isixhobo esithembekileyo kwitafile.
Kutheni iPUBG Aimbot yethu
I-PUBG aimbot elungileyo iya kuphumelela imidlalo yakho kwangoko, njengoko uya kuba nakho ukudubula ngokuchanekileyo kunaye nawuphi na omnye umdlali kwigumbi lakho lokungenisa. Bambalwa kakhulu abantu eMhlabeni abanokuthi banokuchaneka kwerobhothi ngaphandle koncedo lwezixhobo, ndiyabulela ukuba uluhlobo lomntu ongakuthandiyo ukukopela ukuya phambili (akunjalo?).
Kutheni iPUBG ESP yethu
Sebenzisa i-PUBG ESP yeyona ndlela isebenzayo yokugcina iithebhu kutshaba lwakho, kuba azinakufihla xa ubona ngqo kwiindawo eziqinileyo nezingacacanga. Uyakwazi ukubona amagama abadlali, kunye nokuba bangakanani na impilo abasele nayo kunye nezixhobo abazisebenzisayo- ukuba ulwazi olo alonelanga, zininzi ezinye iindlela ze-ESP onokukhetha kuzo .
Kutheni iPUBG yethu yeWall Hack
IWall Hack yethu ayifumaneki ngokupheleleyo kwaye ikuvumela ukuba ube nesandla esiphezulu ngaphandle kokubeka i-akhawunti yakho emngciphekweni. Isikrini asixinene ngolwazi olungacwangciswanga xa uvule iPUBG Wall Hack yethu, njengoko yonke into oyibonayo iza kuba luncedo- iGamepron ikunika yonke into efunekayo ukuphumelela!
Kutheni iPUBG Norecoil yethu
I-PUBG ngumdlalo ongaxoleli kakhulu, oko kuthetha ukuba uya kuzifumana ukhwaza kwiscreen ngenxa yokuphazamiseka okuncinci. Ngale nto ithethwayo, ukubuyela kwimeko yesiqhelo kukuphazamiseka okukhulu, kodwa ikwakhona onokuyishenxisa ngelixa usebenzisa iPUBG Hack yethu. Nokuba i-aimbot inika amandla ukukhwela kwakho kuya kuhlala ngqo kwaye kunakho ukuthatha abona badlali banobuchule kwigumbi lakho lokungenisa.
Ungazikhuphela njani ezona hacks zilungileyo zePUBG?
Sikunika ukufikelela kwii-hacks zethu ngokusebenzisa izitshixo zemveliso, zonke ezikuvumela ukuba usebenzise indawo ekhethekileyo ye-Gamepron kwimidlalo oyithandayo. I-PUBG Hacks zethu zinokukhutshelwa kwangoko emva kokuba uthengile kwaye wenza ukuba imveliso yakho isebenze, nokuba umisele ixesha elingakanani.
Kutheni le nto iPUBG yakho ibiza kakhulu kunezinye
IiPUBG Hacks zethu azibhaqwanga ngokupheleleyo, oko kuthetha ukuba iakhawunti yakho ayizukuba semngciphekweni ngelixa ukopela. Uninzi lwababoneleli baya kuthi banokukhuselwa kokukopela kwaye ugqibela ngokuvalwa ngaphandle koko, kodwa sinyani sinyusa i-100% yokungafunyanwa. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa ukukopa kwethu kuyafumaneka kuphela.
Sinezitshixo zemveliso ezifanelekileyo kuwo wonke umntu! Nokuba ujonga isitshixo semihla ngemihla, ngeveki, nangokhiye wenyanga, sinokukunceda ngokusemandleni ethu. Asifuni ukunciphisa abasebenzisi bethu kwaye yiyo loo nto sigcina izinto ziguquguqukayo, sikuvumela ukuba uthenge ukufikelela kumda wexesha lokukhetha kwakho.
Kuhle PUBG yimfumba Iimbonakalo